Iyo iPhone 7 uye Apple Watch 2 ikozvino yawanikwa yekuchengetedza | IPhone nhau
Sekuvimbisa kwakaita Apple padandemutande rayo, Chitoro chepaApple chakavhurwa muSpain na9: 01 mangwanani ano kutanga kusungirirwa kweiyo nyowani iPhone 7 uye itsva Apple Watch nhepfenyuro 2. Zvitoro zveApple zvepasirese kutenderera pasirese Ivo vakavhura panguva imwe chete kuita kuchengetedza kwavo zvigadzirwa zvitsva, uye avo vaida kunakidzwa ne iPhone yavo kubva pazuva rekuvhurwa kwayo, musi waGunyana 16, vakamhanya kuti vaedze kuwana imwe yemidziyo nekukurumidza kuendesa. Sezvanga zvichitarisirwa, iwo ekutanga mayuniti akakurumidza kutengeswa kunze uye nguva dzekutumira, zvinoenderana nemhando yacho, yakatarwa kubva pamaminetsi mashoma kusvika kweanopfuura vhiki ina..
Chigadzirwa chakambotengeswa kunze chave chiri icho iPhone 7 Plus mune inopenya nhema mhando, iyo kubva panguva yekutanga yatotara 2-3 mavhiki ekumirira. Kunyangwe kusahadzika kwevakawanda pamusoro pekupokana kweiyo glossy layer uye kuti mutengo wayo wekutanga wainge watokwira sezvo wainge usina mukana wekuiwana mune 32GB kugona, sezvaitarisirwa, iyo nyeredzi modhi yanga iri, nekuti ndiyo yega iyo, kunze kwekunze, inopa kunzwa kwekuve iPhone nyowani. Iyo matte dema modhi yakagamuchirwawo zvakanaka, zvakare nyowani kunyangwe iine kutaridzika kushoma kutaridzika mukutsinhana kunoratidzika kunge kusinga pesane nemhirizhonga. Panguva ino, mazhinji eiyo iPhone 7 uye 7 Plus mamodheru atove kuoneka ekutakura mumwedzi waNovember, kunyangwe mazhinji achichengetedza misi yemwedzi mumwe wekutakura.
Chimwe chinhu chakafanana chiri kuitika neiyo nyowani yeApple Watch nhepfenyuro 2, iri kuonawo mazuva ekutumira achireba sezvo maminetsi apfuura. Chigadzirwa chine kumirira kwenguva refu kutumirwa parizvino iri iyo Nike + edition, nekutumirwa mune yayo 42mm modhi yatove yakaziviswa kupera kwaGumiguru.. Rangarira kuti hutsva hukuru hweiyi nyowani yakateedzana 2 kusanganisa kweGPS uye kushomeka kwemvura kusvika pamamita makumi mashanu.
Kuwanikwa muzvitoro saGunyana 16
Kunyangwe nhasi kubvisirwa kweiyo nyowani iPhone 7, 7 Plus uye Apple Watch nhepfenyuro 2 kutanga, hazvizove kusvika Chishanu chinotevera, Gumiguru 16 apo vanogona kutengwa muzvitoro. Zvichava zvakaoma kutora modhi pasina kusati kwachengeterwa, kunyange zvakadaro vashandisi vazhinji vava kutosiya sarudzo yekubhuka pamhepo kuyedza kutora yako nyowani iPhone kana Apple Tarisa zvakananga kubva kuchitoro musi iwoyo. Wanga wakachengetedzwa sei? Ndeupi muenzaniso wawasarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 uye Apple Watch 2 izvozvi zvave kuwanikwa pre-odha
Jose Ribalta akadaro
Iyo GOLDEN MASTER 10.0.1 inoburitsa yave kuwanikwa 🙂
Pindura kuna Jose Ribalta
Zvakanaka, zvishoma. Ini ndaifunga kuti unogona kuita reservation kuinhonga musi wa16 pane chimwe chitoro, asi mufaro wangu mutsime, AppleWatch series2 inogona kutengwa asi ipapo pakanga pasina mukana wekutora muzvitoro. Wedzera kuti kwave nekumwe kunonoka mukuvhurwa kwechitoro.
Ichokwadi kuti chitoro chepamhepo chakavhura dzinenge 9:06 kana zvakadaro asi, zvirinani kuti hazvina kundipa dambudziko ... izvozvi 😉
Pindura kuna MARCOS
wakandel More akadaro
Zvakanaka, kana usina chawakachengetera, iwe unongobvumidza kutenga nekuunganidza muchitoro kana kutenga nekutumira, asi usati WABhadhara. Zvirinani iro kadhi data randaifanirwa kuisa mune ese maviri kesi (2 ndeyekutora gumi nematanhatu uye imwe inotumirwa kupera kwemwedzi)
Pindura kuna wakandel Zvimwe
rarama kwenguva refu apuro
Glossy nhema kuSpain Ini handichazviita kusvika munaNovember ini handikwanise kumirira iyo yakareba fenzi kuchengetedza
Mukudaro, ini ndakachengeta iyo apple wachi akateedzana 1, 42 mm uye pasina dambudziko. Zuva rekutumira harina kufamba parizvino, kuve Nyamavhuvhu 16 iro zuva uye kutumirwa kwekukurumidza.
zvisingaite kuita chero chinhu, hazvitenderi iwe kuti usarudze chitoro, hazvibvumidze iwe kubhuka Izvo zvinongorega iwe ubhadhare uye kutumira pamhepo, kuseka. Havatombopindura mitsara yefoni.
Ini ndakachengeta iyo iPhone 7 4,7 uye 32 GB yeiyo 16 pa9: 45-10 mangwanani muApple Store muPasseig de Gracia muBCN.
Kutendeseka, ini handishandisi iyo kamera zvakanyanya zvekuti iyo mbiri kamera inoita kuti nditsamire kune yekuwedzera ine yakanyanya mutengo musiyano.
Ndiine yangu 5 GB iPhone 16S handisati ndambove nematambudziko ekurangarira (ini ndichine 2GB iripo) uye ikozvino ne32 GB ndichave nezvakaderera uye zvichiri kufanira kuchinja yangu iPhone
Kuve kana tikazvizivisa pachedu tisati tanyora, iyo apuro wachi s2 nike vhezheni haina kutengeswa kunze uye vanhu vazhinji havana kuichengeta, ndeyekuti pakutanga zuva rekusimuka raive kupera kwaGumiguru, rakanga risina kufanana ne apple wachi s1 uye s2 unova Gunyana 16.
Zvakanaka, mumwe mubvunzo, ndakaenda kuMiami musi wa22 / 9, uye ini ndaida kuona kana paine mukana wekuichengeta (iphone 7 plus) uye kuinhonga, kana kuitumira, asi chero zvakadaro haindibvumidze, Ini ndinojekesa ndiri kutsvaga kusunungurwa, kwete neimwe kambani. inofanira kunge iri nekuda kweizvozvo? Chii chakanyanya kunaka kwandiri kuti ndiite? Ndatenda!
Iyo nhema yakasviba ndeyechokwadi nhema, imwe yacho ingori nzvimbo yakasviba grey.